Rwiyo rwaDhavhidhi. 101 Ndichaimba nezverudo rusingachinji uye kururama. Ndichaimba ndichikurumbidzai,* haiwa Jehovha. 2 Ndichangwarira uye ndichava asina mhosva* pamaitiro angu. Muchauya riini kwandiri? Ndichafamba mumba mangu nemwoyo wakaperera.+ 3 Handizoisi chinhu chisingabatsiri pamberi pemaziso angu. Ndinovenga zviito zvevaya vanotsauka pakuita zvakarurama;+Ndichasiyana nazvo zvachose.* 4 Mwoyo usina kururama uri kure neni;Handizobvumi* zvakaipa. 5 Munhu wese anosvibisa zita remuvakidzani wake pachivande,+Ndichaita kuti anyarare. Munhu wese ane maziso anozvikudza uye ane mwoyo unozvitutumadza,Handizomusiyi akadaro. 6 Ndichatarisa vakatendeka vari panyika,Kuti vagare neni. Munhu anofamba asina mhosva,* achandishumira. 7 Hapana munhu anonyengera achagara mumba mangu,Uye hapana munhu anonyepa achamira pamberi pangu.* 8 Mangwanani ega ega ndichaita kuti vakaipa vese vari panyika vanyarare,*Kuti ndiparadze vanhu vese vanoita zvakaipa vari muguta raJehovha.+
^ Kana kuti “akaperera.”
^ Kana kuti “Zviito zvavo hazvindinamatiri.”
^ ChiHeb., “Handizozivi.”
^ ChiHeb., “pamberi pemaziso angu.”
^ Kana kuti “ndichaparadza vakaipa vese vari panyika.”